:: My Little World ::: October 2006
ဒီနေ့Halloween နေ့ ။ သူငယ်ချင်းတွေက ပြောတယ် ဒီညနေ သူတို့Halloween ပါတီသွားကြမယ်၊ အလုပ်မှာ ဆိုလည်း ဒီနေ့အတွက်ဆိုပြီး ထူးထူးခြားခြား ပြင်ဆင်ထားတာတွေ ရှိတယ်တဲ့။ အင်း…. မနာလို ဖြစ်အောင် ပြောနေကြမှန်း သိရက်နဲ့မနာလို ဖြစ်ချင်လာတယ်။ သူတို့ စီမှာ ဘယ်လောက် ထူးခြားထူးခြား ဒီမှာတော့ ဘာမှ မထူးခြားတဲ့ နေ့ လေး တစ်နေ့ ပါပဲ။
သူတို့ လုပ်တာနဲ့ကျောင်းတက်နေရင်း အချိန်ပိုင်း အလုပ်ဝင်တုန်းက အလုပ်မှာ ကြုံခဲ့ရတဲ့၊ Halloween နေ့ နဲ့Halloween ပါတီကို သတိရသွားတယ်။ အဲ့ဒီနေ့မတိုင်ခင် တစ်ပတ်၊ နှစ်ပတ် အလိုထဲက အလုပ်မှာ ပြင်ကြ ဆင်ကြနဲ့အလုပ်တွေ ရှုပ်နေကြတယ်။ အလုပ်ပျက်လို့စိတ်တိုရတဲ့ကြားထဲ ပြင်ပြီး၊ ဆင်ပြီးတော့ တွေ့ ရတာက လှတပတလေးတွေလည်း မဟုတ်။ အလုပ်မှာရောက်နေတာနဲ့မတူပဲ အိမ်အိုအိမ်ဟောင်း သရဲရှိတဲ့ အိမ်ထဲ ရောက်နေရတဲ့ အတိုင်းပဲ ခံစားခဲ့ရတယ်။ Halloween နေ့ရောက်တော့လည်း အလုပ်ရောက်တာနဲ့GM နဲ့Manager တော်တော်များများကို ၀တ်စုံနက်ကြီးတွေ ၀တ်၊ မျက်နှာတွေမှာလည်း မဲမဲကြီးတွေချယ်လို့ ၊ ခေါင်းမှာ ကလည်း စုန်းမတွေ ဆောင်းတဲ့ ဦးထုပ်မျိုးတွေဆောင်ပြီး တွေ့ ရပြန်ရော။ manager မ တစ်ယောက်ဆို လက်ထဲမှာ တံမြက်စီးကြီး ကိုင်ထားတာ စုန်းမကြီးနဲ့တူလိုက်တာလို့တွေးမိတာပဲ။ အပြင်မှာတော့ ဘယ် ပြောရဲပါ့ မလ၊ ဒါပေမယ့် စိတ်ထဲမှာ ကြီးကောင်ကြီးမားတွေနဲ့ပေါရဲ လိုက်တာလို့ပြောခဲ့မိတာပေါ့။ သူတို့ က staff နဲ့customer တွေကို လိုက်နှုတ်ဆက်၊ သကြားလုံးတွေ လိုက်ပေးနဲ ပျော်စရာတော့ အကောင်းသား။ ဘာပဲ ပြောပြော အဲ့ဒီနေ့ က ဟိုလူလာပေး၊ ဒီလူလာပေးနဲ့သကြားလုံးတွေတော့ အများကြီးရခဲ့တာကို သတိရမိတယ်။ ( ခုမှ စဉ်းစားမိတယ်၊ သူတို့ တွေနဲ့ယှဉ်ရင် လူကောင်သေးသေးလေးမို့ကလေးတစ်ယောက် လို့သဘောထားပြီး သကြားလုံးတွေ လာလာပေးတာနဲ့တူပါရဲ့။ )
ညဖက် အိမ်ပြန်ရောက်တော့လည်း ကလေးတွေ လာပြီး တခါးခေါက်တာနဲ့ကြုံရပြန်ရော။ ပုံဆိုးပန်းဆိုး ပုံတွေနဲ့ဆိုတော့ တစေ၊ သရဲ၊ မှင်စာ လေးတွေလားလို့လန့် သွားတာပဲ။ ကိုယ်ကလည်း တစ်ခါမှ မကြုံ ဘူးတော့ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ၊ သူတို့ ကလည်း သူတို့size လောက်ပဲ ရှိတဲ့ လူမျိုးခြား တစ်ယောက်ကို မြင်တော့ ဘာပြောရမှန်း မသိ၊ နှစ်ဘက်လုံး ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်သွားကြတာ၊ ပြီးတော့ တစ်အိမ်တည်း တူတူနေတဲ့ Scottish မ က bell သံကြားလို့ဆိုပြီး ထွက်လာတာနဲ့ကျွန်မတို့ ကို တွေ့ သွားပြီး၊ ကလေးတွေ ကို သကြားလုံးတွေ ပေးလိုက်မှ အဆင်ပြေ သွားတော့တယ်။ ပြီးတော့ သူက ရှင်းပြတယ်။ နောက် အုပ်စုတွေလာရင် ပေးဖို့ ဆိုပြီး သူဝယ်ထားတဲ့ သကြားလုံးတွေထားတဲ့နေရာကို ပြတယ်လေ။ မှတ်မှတ်ယယ ပတမဆုံး Halloween ည အတွေ့မကြုံပါပဲ။ အဲ့ဒီ နှစ်ကတော့ ကြုံရတယ်ဆိုတာကလည်း ကျွန်မက အပြင်မှာ အိမ်ငှါး နေဖြစ်ခဲ့လို့ ပါ။ အရင်နှစ်တွေက အဆောင်မှာနေတာဆိုတော့ ဒါမျိုး မကြုံရပါဘူးလေ။
Posted by Nay Nay Naing at 10/31/2006 04:21:00 PM4comments
Holloween နားနီးပြီဆိုတော့ ဆိုင်တွေမှာ pumpkin တွေကို ကြောက်စရာ ကောင်းတဲ့ ပုံတွေ လုပ်ထားလေ့ရှိတာကို တွေးမိသွားလို့လိုက်ရှာလိုက်တာ ဒါလေးတွေ တွေ့ လိုက်ရတယ်။
ဒီမှာက Holloween ဆိုတာဘာလဲ နဲ့ဘာလို့Holloween မှာ pumpkin တွေကို ပုံတွေထွင်းပြီး ထားကြတယ် ဆိုတာတွေကို ပြောပြထားပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်မက english ကလည်း ကိုဟာကိုတောင် မနည်း နားလည်အောင် ဖတ်နေရပြီး၊ ဘာသာပြန်တာကလည်း မတော်ဆိုတော့ သူရေးထားတာတွေကို ပြန်ရေးမပြတော့ပဲ သိချင်သူများ ဖတ်ချင်ရင်ဖတ်လို့ ရအောင် website link ကို ပဲ ပေးထားလိုက်ပါတယ်။ ပျင်းတာလည်း ပါတာပေါ့လေ။
Source : Pumpkincarving
ဒါကတော့ ပုံမှန်တွေ့ နေ ကြ holloween မှာတွေ့ နေရတဲ့ ပုံတွေ နဲ့မတူတဲ့ ပုံတွေပါ။ဒီလိုမျိုး ပုံတွေအများကြီကို villa fane studios မှာသွားကြည့်လို့ ရပါတယ်။ ဒါတွေကို ဘယ်လို လုပ်လည်းသိချင်ပြီး စမ်းကြည့်ချင်တဲ့ သူတွေအတွက် အဲ့ဒီမှာ ဘယ်လို့လုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့ tutorial အသေးစိတ်ကို ရေးပြထားတာ တွေ့ ရမှာပါ။
Source : Villafanestudios
Posted by Nay Nay Naing at 10/31/2006 09:31:00 AM0comments
မနေ့ က အလုပ်မှာ လုပ်စရာမရှိ အားနေတော့ ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ဟိုစဉ်းစား ဒီစဉ်းစား လုပ်မိတယ်။ လူတိုင်း ကြုံဘူးမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ မနက် ၉ နာရီကနေ ညနေ ၆ နာရီ ဆိုတဲ့ အချိန်ဟာ အလုပ်မှာ လုပ်စရာ ရှိနေတဲ့ သူတွေ အတွက်သာ ခဏလေး လို့ထင်ရနိုင်ပေမယ့်၊ ဘာမှ လုပ်စရာမရှိ၊ ကွန်ပြူတာ တစ်လုံးရှေ့မှာ ကိုယ်စိတ်မ၀င်စားတဲ့ စာတွေကို ထိုင်ဖတ်နေရုံက လွဲရင် ကျန်တာ ဘာမှ လုပ်လို့မရတဲ့ သူတစ်ယောက် အတွက်တော့ တော်တော့်ကို ရှည်ကြာ စိတ်ပျက် ပျင်းရိငြီးငွေ့ ဖွယ်တဲ့ အချိန်ကာလပါပဲ။ အလုပ်မှာ အလုပ်လုပ်စရာ မရှိပဲ ဒီတိုင်းထိုင်နေရတာ လောက် စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတာ ရှိမယ် မထင်ပါဘူး။
လုပ်စရာမရှိလို့ဟိုစဉ်းစား ဒီစဉ်းစား လုပ်နေမိရာကနေ မေးခွန်းလေး တစ်ခု ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်မေးလိုက်မိတယ်။ ထူးထူးခြားခြားတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အလုပ်မှာ ထိုင်နေရင်း တွေးမိတာဆိုတော့ အလုပ်နဲ့ ဆိုင်တာကိုပဲ တွေးမိ တာပါ။ ကျွန်မကို ကျွန်မ ပြန်မေးမိတဲ့ မွေးခွန်းကတော့ "ငါဘာလို့အလုပ် လုပ်နေတာလဲ" ဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေးပါ။ ပထမတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်မေးမိတဲ့ မေးခွန် အတွက် ကိုယ့်ဟာကို အဖြေက အဆင်သင့် မရှိ ဖြစ်နေ ပါသေးတယ်။ နောက် တွေးရင်းနဲ့ တော့ မေးခွန်းရှိရင် အဖြေရှိရမယ် ဆိုသလိုပဲ အဲ့ဒီ မေးခွန်း အတွက် အဖြေ ကို စဉ်းစားလို့ရလိုက်ပါတယ်။
ကိုယ့်ဟာကို အဖြေရရုံနဲ့မပြီးသေးဘူး၊ ညနေ ၆ နာရီကလည်း မထိုးသေး၊ အိမ်လည်း မပြန်နိုင်သေးဘူး ဆိုတော့ သူများတွေရော ဒီမေးခွန်းကို အမေးခံရရင် ဘယ်လို ဖြေ မလည်းလို့ဆက်ပြီး အတွေးရှည် နေမိ ပြန်တယ်။ အဲ့ဒီ အချိန်က ဘေးနားမှာ မေးစရာ လူကလည်း မရှိ၊ online ကနေ့တဆင့် သူငယ်ချင်းတွေကို မေးရအောင်ကလည်း အလုပ်မှာ ဘယ် messenger ကိုမှ သုံးခွင့် မရှိဘူး ဆိုတော့၊ ထုံးစံ အတိုင်း google လုပ်ကြည့်လိုက်တာ အဲ့ဒီ မေးခွန်းကို ဖြေထားတဲ့ page တော်တော် များများကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ အဲ့ဒီ page တွေကို လျှောက်ဖတ်ကြည့်ရင်းနဲ့ဒီpage လေးကို တွေ့ ပြီး သဘောကျ နှစ်သက်သွားလို့ကျွန်မရဲ့ ဘလောခ့် ပြန်လည် ဖော်ပြလိုက် ပါတယ်။
* Work in celebration of your natural strengths, talents and gifts.
* Work to make your weaknesses irrelevant, for they are.
* Work at something you love doing, something that brings you joy.
* Work to feel the satisfaction of good hard work, of intentional effort.
* Work to breakasweat, and to get dirty and gritty and real.
* Work to fulfill your personal mission, or
* Work to show your agreement with another’s mission.
* Work to makeadifference, to feel fulfilled, to “make meaning.”
* Work to serve others well, and serve your spirit for giving.
* Work to support someone you care about.
* Work to help someone you believe in.
* Work to learn what you don’t yet know, and
* Work to teach, coach, and mentor others as only you can.
* Work foracause you feel deeply about.
* Work to leavealegacy.
* Work to createabetter future.
* Work to deliveragift to humanity.
Source : Why Work By Rosa Say
လူတိုင်း လွတ်လပ်စွာ သဘောထား ကွဲလွဲခွင့်ရှိကြသည်။
Posted by Nay Nay Naing at 10/28/2006 09:55:00 PM5comments
My First Day At New Job
အလုပ်သစ်မှ စလုပ်ရတဲ့ ပထမဆုံးနေ့ ။ အလုပ် မသွားပဲ ၁ ပတ်လောက် နားနေရာကနေ အလုပ်ပြန်သွားရတဲ့ ပထမဆုံးနေ့ ဆိုတော့ ပင်ပန်းနေတယ်လို့ခံစားနေရတာ နဲ့ဘာမှ များများစားစား မရေးတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မှတ်မှတ်ရရ ဖြစ်အောင် ဒီနေ့တစ်နေ့ လုံး နေရာတိုင်းမှာ တွေ့ နေရတဲ့ စားသားလေးကိုပဲ ရေးထား လိုက်တော့မယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 10/27/2006 09:24:00 AM0comments
OpenSource applications ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူတွေ အတွက် အသုံးဝင်မယ်ထင်လို့ဒီမှာ ထပ်ဆင့်မျှ ဝေလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မ အနေ နဲ့ တော့ No. 1 to6အထိကို သုံးဘူးပါတယ်။ သုံးမိသလောက်တော့ သဘောကျမိတယ်။
1. Mozilla Firefox (Web browser)
အလုပ်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မ အမြဲ သုံးတဲ့ computer တိုင်းရဲ့ default browser ပါ။
Crikey, another Firefox plug! Yeah, we love the 'fox, and we'll keep talking about it until EVERY SINGLE ONE OF YOU USES IT. It really just doesn't get any better when it comes toacross-platform, open source web browser.
2. Mozilla Thunderbird (Email client)
အလုပ်က computer မှာ email ကို outlook နဲ့ မသုံးချင်တာနဲ့ဒီ ဟာကို email client အဖြစ် သုံးလေ့ရှိတယ်။ သုံးရတာ အဆင်ပြေပါလို့ဆက်သုံးဖြစ်သွားခဲ့ တယ်။
Firefox's much less celebrated little brother is one helluva email client. We especially like its customizable message filters, built-in adaptive Junk mail filter and ability to install useful add-ons (like Firefox).
3. Open Office (Office suite)
ဟို အရင် လုပ်ဘူးတဲ့ company တစ်ခုမှာ computer တိုင်းမှာ MS office မရှိတာလို့အတော့်ကို ဒုက္ခရောက်တာနဲ့free သုံးလို့ ရတဲ့ office လို software လိုက်ရှာရကနေပြီး ဒီ open office ကို တွေ့ ပြီး သုံးဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။ စ စ သုံးချင်းတော့ ကိုယ်က MS office ကို သုံးနေကြဆိုတော့ နည်းနည်း ရှုပ်နေသလို ခံစားမိတယ်။ နောက်ပိုင်း သုံးကျင့်ရလာတော့ တော်တော်လေး အဆင်ပြေပါတယ်။ ကျွန်မ အဓိက သုံးဖြစ်တာက Words, Excel and PowerPoint ပါ။ MS office software မရှိသူများ သုံးသင့်တဲ့ software တစ်ခုပါ။
Used to be that anyone who wanted to openaWord document had to dropafew Benjamins on Microsoft Office or risk pirating it. No more - Open Office isafree alternative to M$ Office for students, freelancers and poor people just wanting to save their spreadsheet as an .xls.
4. Gaim (Instant messenger)
ကျွန်မလို messenger ပေါင်းများစွား သုံးလေ့ရှိတဲ့ သူတွေ အတွက် အသုံးဝင်လှပါတယ်။ ကျွန်မ ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက messenger ကို တစ်ယောက်တစ်မျိုး သုံးလေ့ရှိတော့ သူတို့အားလုံးနဲ့မြဲ အဆက် အသွယ်ရှိဖို့ ဆိုရင် ကျွန်မ မှာ ရှိသမျှ messenger အားလုံး သွင်းထားရပါတယ်။ အိမ်က computer မှာဆို ဘာမှ ပြဿနာ မရှိပေမယ့်၊ အလုပ်မှာ ကြတော့ messnger အားလုံး သွင်းဖို့ ဆို တာ အဆင်မပြေပါဘူး။ ဒီ Gaim မှာက ရှိသမျှ messenger account တွေကို add လုပ်ထားလို့ ရတယ်ဆိုတော့ ဒီ software တစ်ခုသွင်းထားလိုက်ရင် တစ်ခြား messenger တွေကို တစ်ခုခြင်းစီ သွင်းစရာမလိုတော့ အရမ်း အဆင်ပြေတာနဲ့သုံးဖြစ်သွားတာပါ။
Chat on any service you'd like - AIM, Yahoo! Messenger, MSN, Jabber, ICQ - with this multi-platform, tabbed IM client.
5. ClamWin (Antivirus)
ကျွန်မ တို့ လို့Antivirus software တွေကို ပိုက်ဆံ ပေးမ၀ယ်နိုင်သူတွေ အတွက် အများကြီး အသုံးဝင်တဲ့ software တစ်ခုပါ။ သုံးရတာ အဆင်ပြေပါတယ်။
Norton bugging you again to break out the credit card and subscribe? Uninstall! ClamWin is free anti-virus software with automatic updates and scheduled scans, no credit card required.
6. VLC Media Player (Audio/video player)
ဟို အရင်ကဆို ကျွန်မ က movie တွေ ကို download လုပ်ကြည့်လေ့ရှိပါတယ်။ တစ်ချို့movie file တွေက window media, quicktime, divx player, winamp player တွေနဲ့ဖွင့်လို့မရ ဖြစ်နေတတ်တော့ အဲ့လို့file တွေကို ဖွင့်လို့ ရနိုင်မယ့် software လိုက်ရှာ ရင်းကနေ ဒီ VLC media player ကို တွေ့ ပြီး သုံးဖြစ်သွားတာပါ။ movie download ပြီး ကြည့်လေ့ရှိတဲ့ သူတွေ အတွက်တော်တော် အသုံးဝင်တဲ့ software တစ်ခုပါ။
Gotavideo or audio file Windows Media Player or Quicktime can't play? Betcha VLC can.
7. KeePass (Password manager)
Another app you really don't hearalot about, but for anyone with more than6different passwords, KeePass is indispensable. Check out my previous feature, Securely track your passwords for more on using KeePass.
8. Cygwin (Unix command line emulator)
That DOS command line just doesn't cut it. Wanna turn intoaCLI ninja on your PC? You need Cygwin. (For more on using Cygwin, check out these previously-posted Cygwin tutorials part 1, part2and part 3.)
9. Eraser (Data deletion utility)
Before you donate, sell or trash your hard drive, you want to make sure there are no traces of your naughty private data on it. Eraser uses the same algorithm the government uses to wipe your hard drive clean.
10. TrueCrypt (File encryption utility)
You've gotafolder full of files you don't want anyone to access but you. Lock it (or an entire thumb drive) up with the free TrueCrypt software. Check out the previously-posted Encrypt your data article for more on using TrueCrypt.
Posted by Nay Nay Naing at 10/21/2006 11:59:00 PM4comments
ခုပဲ ဖေဖေကို လေဆိပ်လိုက်ပို့ ခဲ့တဲ့။ ဒီတစ်ပတ်လုံး ဖေဖေရောက်နေတာနဲ့အလုပ်တွေ ရှုပ်နေတာ။ တော်သေးတယ်၊ အလုပ်အဟောင်းက ထွက်ပြီး အလုပ်အသစ်မ၀င်ဖြစ်သေးတဲ့ အချိန်ဆိုတော့ ဟိုပို့ ဒီပို့နဲ့ဖေဖေ အလုပ်ကိစ္စတွေကိုလည်း လိုက်လုပ်ပေးဖြစ်သွားတယ်။ အလုပ်သာ လုပ်နေတယ်ဆို ဖေဖေနဲ့တွေ့ ဖို့အချိန် ရှိမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဘယ်မှ တော့ သိပ်လိုက်မပို့ဖြစ်လိုက်ပါဘူး။ ဖေဖေက သူ sentosa မရောက်တာ ၁၀ ကျော်ပြီဆိုလို့မနေ့ ကတော့ sentosa လိုက်ပို့့ဖြစ်လိုက်တယ်။ ဒီတစ်ခေါက် ဖေဖေက hotel မှာ မနေပဲ အိမ်မှလာနေပြီး လိုတာ အားလုံးဝယ်ပေး သွားတယ်။ အိမ်ပြောင်းခါစဆိုတော့ လိုနေတာတွေက တော်တော်များတယ်။ ခုလိုလာပြီး ၀ယ်ပေးသွားတော့ ကိုယ့်ပိုက်ဆံ မကုန်တော့ဘူးပေါ့။ နောက်တစ်ခေါက်တော့ hotel မှာပဲ တည်းတော့မယ်တဲ့ ။ နောက်တစ်ခေါက် မေမေ နဲ့ညီမလေး ပါ ပါလာရင်ကောင်းမယ်။ ဒါဆို ညီမလေးနဲ့shopping သွားလို့ ရတယ်။ အိမ်ကိုတော့ သတိရသား။ ပြန်ရင် ကောင်းမလား စိတ်ကူးနေတာ၊ ညီမက သူ final exam ဖြေနေတယ်၊ ပြန်မလာနဲ့ ဦးဆိုလို့နောက်မှ ပဲ ပြန်တော့မယ်။ အဓမ္မ ခွန်ကလည်း ၁ နှစ်နီးပါစာ ပေးဖို့ ကျန်သေးတယ်။ ရန်ကုန် ကို ပြန်မယ်ဆို အဲ့ဒါကြီးရှင်းသွားမှ ပြန်လို့ ဖြစ်မှ ဆိုတော့ ရှင်းဖို့ က ပိုက်ဆံ မရှိဖြစ်နေတာနဲ့အတော်ပဲဖြစ်သွားတယ်။ အော်.. ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကိုယ်တောင် ပြန်ချင်တိုင်း ပြန်လို့မရ၊ ပိုက်ဆံရှိမှ ပြန်လို့ တဲ့ ဘ၀တွေများ ဆိုးလိုက်တာနော်။
Posted by Nay Nay Naing at 10/19/2006 12:11:00 AM0comments
18 Oct 2006 - Silence Birthday
ဒီနေ့ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ ၄၄ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ ပါ။ ခုချိန်မှာ မွေးနေ့ရှင် ဘယ်ရောက် နေမှန်း မသိရ၊ သူ့ မွေးနေ့ မှာ ဆုတောင်းပေး ကြတာတွေကို သူကိုတိုင် မမြင်နိုင်ပေမယ့် ကျွန်မ၊ ကိုမင်းကိုနိုင် အတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းလေး ရေးပေးချင်မိ ပါတယ်။
မင်္ဂလာရှိသော မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ။
အောင်မြင်မှု့ များ၊ လွတ်လပ်မှု့ များ စီသို့ လျှင်မြန်စွာ ရောက်ရှိ၊ ရရှိ နိုင်ပါစေ။
အားလုံး အတွက် စွန့် လွှတ်၊ အနစ်နာခံ၊ ကြိုးပမ်းနေမှု့ များအား ကျေးဇူးတင် လေးစားလျှက်....
Posted by Nay Nay Naing at 10/18/2006 12:59:00 PM3comments
17 Oct 2006 - 2nd Interview
ပြီးခဲ့တဲ့ ကြာသာပတေးနေ့ က သွားထားတဲ့ interview က ဒီနေ့မနက်စောစောက ဖုန်းဆက်ပြီး ညနေ ၆ နာရီမှာ 2nd interview လာခဲ့ပါ လို့ပြောတာနဲ့သွားလိုက်ရသေးတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ အနေနဲ့ ကတော့ ဒီနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံးအနေနဲ့2nd interview ဆိုတာကို သွားဘူးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမှာ ခုအကြိမ်နဲ့ ဆို အလုပ် သုံးခါရှာဘူး ပါတယ်။ တစ်ခါမှ 2nd interview မသွားရပါဘူး။ interview ကို တစ်ကြိမ်ပဲ သွားရပြီး offer ရတာကြီးပါပဲ။ intetview တိုင်း offer ရတယ် ပြောချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရခဲ့ရင် လည်း တစ်ကြိမ်ပဲ သွားပြီး ရတယ်လို့ပြောချင်တာပါ။
ဒီမနက် 2nd interview လာခဲ့ပါဆိုတော့ ကျွန်မ အနေနဲ့ ကတော့ ထူးဆန်းသွားတာပေါ့။ တစ်ခါမမှ မကြုံဘူးတာ။ စဉ်းစားတယ် 1st interview နဲ့2nd interview နဲ့ဘာကွာလည်းပေါ့။ internet မှာ ရှာကြည့်တယ်။ ပြီးတော့ သူငယ်ချင်းတွေကို မေးကြည့်မိတယ်။ အင်း .... အမေးကောင်းတာနဲ့အကြွားခံလိုက်ရသေးတယ်။ သူငယ်ချင်း အစ်ကိုကြီး တစ်ယောက်က ကျွန်မမေးတာကို ဘယ်လို ဖြေလည်း ဆိုတော့ သူကတော့ 2nd interview ဆိုတာ မသိဘူးတဲ့၊ သူအလုပ်ရတာကတော့ 1st interivew ပြီးပြီးခြင်းမှာပဲ သူကို အလုပ် offer ပေးတယ်ဆိုပြီး ပြောလိုက်လို့သူမှာ ချက်ချင်းကြီး စဉ်းစားရခက် သွားခဲ့ရပါသေးတယ်တဲ့လေ။ အစ်ကိုကြီးရယ်.. မေးမိတာ ညီမ အမှားပါလို့ ပဲ ပြန်ပြောလိုက်ရပါတယ်။ နောက်တစ်ယောက်ကလည်း ပြောတယ်။ interview ဆိုတာ လက်ဝှေ့ ပွဲလို မျိုးနေမှာတဲ့။ ခု 1st round ပြီးတော့ 2nd round လာပြီ၊ နောက် 6th round လောက်ထိ ခေါ်ချင်ရင် ခေါ်နိုင်တယ် ဆိုတော့ လက်ဝှေ့ ပွဲ တွေမှာ ပြင်ဆင် သလိုသာ ပြင်ဆင်ထားလိုက်ပါ တဲ့လေ။
ကျွန်မ internet မှာ ဖတ်မိသလောက်၊ သူငယ်ချင်းတွေ ပြောပြသလောက် ကျွန်မ နားလည်ခဲ့တာက 1st interview မှာ techinical အကြောင်းတွေ မေးပြီးသားဆို 2nd interview မှာ HR က မေးတာများတယ်လို့သိခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်မလည်း ပုံမှန်က technical အများဆုံးမေးတဲ့ interview တွေ ပဲ ဖြေနေကြဆိုတော့ ဒီ interview အတွက် ဘာတွေ ပြင်ဆင်ရမယ်မှန်း မသိဘူး ဖြစ်သွား ပါတယ်။ ဒီမှာ ကျွန်မရဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ပေးတဲ့ အကြံကိုပဲ လိုက်နာလိုက်ပြီး ညနေကြတော့ interview သွားလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မ သူငယ်ချင်းက ဘာ အကြံပေးလည်းဆိုတော့ HR က မေးရင် သူတို့အလုပ် ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကိုယ်နဲ့အစဉ်ပြေနိုင်လား၊ မပြေနိုင်လားဆိုတာတွေကို လူတွေ အများကြီး မေးနိုင်တယ်၊ ပြီးတော့ လခတွေ ဘာတွေ ပြောချင်ပြောမယ်ဆိုတော့ ထူးပြီး ဘာမှ လုပ်မနေနဲ့တစ်နေ့ လုံး နားနားနေနေ အိပ်ပြီး interview သွားခါနီးမှာသာ ထပြီးသွားလိုက်တဲ့လေ။ သူပြောတဲ့ အကြံဥာဏ်က သိပ်ပြီး ကောင်းနေတာမို့ကျွန်မလည်း သူပြောတဲ့ အတိုင်း ညနေ ၄း၅၀ လောက်ထိ အိပ်နေလိုက်ပြီး ၆း၀၀ interview မှီအောင် သွားခဲ့ပါတယ်။
သူများတွေ့ ပြောတာတွေ၊ internet မှာ ရေးထားတာတွေ ကျွန်မ အတွက်တော့ အကုန်မှားသွား ပါတယ်။ ကျွန်မ ကြုံရတဲ့ 2nd interview ဆိုတာကြီးက techincal အကြောင်းတွေကို ပဲ ထပ်မေးပါတယ်။ တစ်နေကုန် အိပ်နေလိုက်တာ မှန်သွားတယ်။ မဟုတ်ရင် ပင်ပန်းနေဦးမယ်။ ထုံးစံ အတိုင်း interview မေးတဲ့ သူက မေးချင်တာတွေ မေးပြီး၊ ကျွန်မလည်း ဖြေချင်တာတွေ ဖြေခဲ့လိုက်ပါတယ်။ သူတို့ခန့်ချင်တယ်ဆို နောက်ရက်ပိုင်း အကြောင်း ပြန်ပါမယ် တဲ့လေ။ ပြီးတော့ ဘာများသူကို မေးချင်းသေးလည်းဆိုတာနဲ့ကျွန်မလည်း စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့မေးခွန်း တစ်ခုမေးခဲ့ လိုက်တယ်၊ ဒါပြီးရင် နောက်ထပ် ဘယ်နှစ်ကြိမ်လောက်များ interview လုပ်ဦးမှာလဲ လို့ ပါ။ အဲ့ဒီ interview လုပ်တဲ့သူက သူကို ဘာလို့interview လုပ်ခိုင်းလည်း သူမသိပါဘူးတဲ့။ ကျွန်မကို ဘယ်နေရာမှာ ခန့် မယ် ဆိုတာကို သူမသိပါဘူးတဲ့။ ပထမဆုံး ကျွန်မကို technical interview လုပ်တဲ့ သူတွေက ကျွန်မ နဲ့တွဲလုပ်ရမယ် သူတွေပါတဲ့။ အဲ့ ဒီသူတွေက technical interview လုပ်ပြီးသားဆိုရင် သူက ထပ်ပြီး interview မလုပ်သင့်ပါဘူးတဲ့။ ဒါပေမယ့် သူအထက်က သူတွေက ကျွန်မကို interview လုပ်ပေးပါဆိုလို့သူခမျာမှာ မအားတဲ့ ကြားက interview လုပ်ပေးရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်၊ သူပြီးရင်တော့ နောက် technical interview ထပ် မရှိနိုင်တော့ပါဘူးတဲ့၊ ဘာလို့ လည်းဆိုတော့ သူက ဒီက IT department မှာ Java နဲ့ပတ်သက်ရင် အကြီးဆုံး position မှာ လုပ်နေတာ ဖြစ်လို့ပါတဲ့လေ။ ဒါပေမယ့် HR က ထပ် ပြီး interview လုပ်ချင် သေးတယ် ဆိုရင်တော့ နောက်ပိုင်းမှာ HR က လူတွေ မေးမယ့် interview ရှိချင်ရင်တော့ ရှိနိုင် ပါသေးတယ် တဲ့လေ။ သူကတော့ Tomorrow မှာ HR ကို အကြောင်းကြားပြီး သူ့အဖြေ ပေးလိုက်ပါမယ်လို့တော့ ပြောတာပဲ။ စိတ်တော့ စိတ်ဝင်စား စရာပဲ။ ဘယ်လိုလာမလဲ တော့ မသိဘူး။ စောင့်ကြည့် လိုက်ဦးမယ်။
ကိုယ့်ကိုကိုယ့် ပြန်ပြီး ဆုတောင်းပေးလိုက်ဦးမယ်။ အစစ အရာရာ အစဉ်ပြေပြီး ကံကောင်းပါစေ။
Labels: Interviews, Singapore
Posted by Nay Nay Naing at 10/17/2006 11:44:00 PM4comments
Last Day at Current Job and Last Week Interviews
ဒီနေ့လက်ရှိအလုပ်မှာ လုပ်တာ နောက်ဆုံးရက်ဆိုတော့ မနက်ဖြန်က စပြီး အားသွားပြီ၊ အလုပ်သွားစရာ မလိုတော့ဘူး။ ဒီနေ့ က ဒီအလုပ်မှာ last day လို့ သာပြောတာ၊ တော်တော် တော့ ပင်ပန်းတယ်။ handover လုပ်ရတာတွေရော၊ တစ်ချို့ရှင်းဖို့ ကျန်နေတဲ့ task တွေကိုရှင်းနေရတာတွေရော ဆိုတော့ ဒီရက်ပိုင်း ပင်းပန်းတယ်။ ဒီကြားထဲ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်မှာက အလုပ်ပြီးတာနဲ့interview ရှိရင် သွားရသေးတယ်။ ပြီးတော့ ကျန်တဲ့ ကိစ္စလေးတွေ တစ်ချို့ က ရှိနေတော့ အလုပ်တွေ ရှုပ်၊ ပင်ပန်းပြီး အိမ်ရောက်တာနဲ့စောစော အိပ်ဖြစ်နေတယ်။ ဘလောခ့်မှာလည်း ပိုစ့် အသစ်မတင် ဖြစ်ဘူး ဖြစ်သွားတယ်။ ရေးချင်တာလေးတွေ ရှိနေပြီး၊ မရေးအားပဲ ဖြစ်နေတာပါ။ နောက် အားမှပဲ ရေးတော့မယ်။
ဒီနေ့ ပြီးရင် ဒီရက်ပိုင်း ချက်ချင်းကြီး နောက် အလုပ်အသစ်ကို လုပ်စရာ မလိုသေးဘူး။ ပျော်လိုက်တာ။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အလုပ် မလုပ်ပဲ ခဏလောက် နေလိုက်ဦးမယ်။ နားနားနေနေ ပေါ့။ ဒီမှာ IT Job Market က ကောင်းနေတယ် ပြောလို့ ရမယ်။ ဒီမှာ interview သွားတာတွေက reply လုပ်တာ အရမ်းမြန်နေတယ်။ နှစ်ရက် သုံးရက်၊ အလွန်ဆုံး တစ်ပတ် အတွင်းမှာ reply ပြန်တာ ကြီးပဲ ဖြစ်နေတယ်။ offer ပေးတယ်ဆိုရင် လည်း နောက် တစ်ရက် နှစ်ရက်နေတာနဲ့အလုပ် စ ဆင်းစေချင်နေတယ်။ နောက်ပြီး ခုတလော ရန်ကုန်က အလုပ်လာရှာတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေလည်း အလုပ်တွေ ရနေကြတယ် ကြားတယ်။ လခတွေလည်း မဆိုးဘူးဆိုတော့၊ job market ကောင်းနေတယ် ပြောနိုင် ပါတယ်။
ကျွန်မ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က interview သုံးခုသွားခဲ့တယ်။ ဒီမှာ ကောင်းတာလေး တစ်ခုရှိပါတယ်။ interview တွေကို အလုပ်ချိန် ပြင်ပမှာ ချိန်းလို့ရပါတယ်။ အလုပ်မပျက်တော့ဘူးပေါ့။ ကျွန်မ သွားခဲ့တဲ့ interview အားလုံးက အလုပ်ချိန် နဲ့လွတ်ပါတယ်။ တနင်္ဂလာ မနက်၊ အင်္ဂါနေ့ ညနေ နဲ့ကြာသာပတေး နေ့ညနေ တွေမှာ သွားခဲ့တာပါ။အင်္ဂါနေ့သွားခဲ့တဲ့ interview က နောက်နေ့ မှာပဲ offer ပေးပြီး၊ offer ပေးတာကို လက်ခံမလား လက်မခံဘူးလား ဆိုတာကို သောကြာနေ့ မှာ reply လုပ်ပါ၊ လက်ခံတယ်ဆို နောက်တနင်္ဂလာ (ဒီနေ့) မှာ အလုပ်စဆင်း စေချင်တယ်တဲ့လေ။ တနင်္ဂလာနေ့က သွားတဲ့ interview ကတော့ ကြာသာပတေးနေ့ မှာ offer ပေးတယ်။ သူကလဲ လက်ခံမလား၊ လက်မခံဘူးလားဆိုတာကို သောကြာနေမှာ reply လုပ်စေချင်တယ်တဲ့။ ... ဒါနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့ က တော်တော် လေး ခေါင်းခြောက်သွားသေးတယ်။ ဘာ ကို accept လုပ်ရမှန်း မသိလို့ လေ။ company တွေက နှစ်ခုလုံး ကောင်းပါတယ်။ တစ်ခုက bank ၊ တစ်ခုက နာမည်ကြီး ကုမဏီ တစ်ခုပဲ။ offer တွေက လခက အတူတူပဲ။ ခုလက်ရှိ လခထက် ရ၀၀ ပိုပေးတယ်။ မဆိုးဘူး ပြောရမယ်။ တစ်ခုမှာတော့ 13 month salary ပါတယ်။ တစ်ခုက မပါဘူး။ တော်တော် စဉ်းစားရ ကြပ်သွားတယ်။ သေချာ စဉ်းစားတယ်.... နောက်ဆုံးတော့ ဘာမှ accept မလုပ်ဖို့ဆုံးဖြစ်ပြီး နှစ်ခုလုံးကို reject လုပ်လိုက်တယ်။ ကြာသာပတေးနေ့ က interview ကတော့ ဒီအပတ်တည်း reply ပြန်မယ် ပြောတာပဲ။ ဘယ်လို reply ပြန်မလဲ စောင့်ကြည့် လိုက်ဦးမယ်။ လူက ပင်းပန်းနေတယ် ခံစားရတာရယ်၊ ခဏခဏ အလုပ် မပြောင်းချင်တာရယ်ကြောင့် နည်းနည်း အချိန်ယူ စဉ်းစား၊ ပြီးမှ အလုပ် အသစ်ကို လက်ခံ လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ လ၊ အလုပ်မှာ ထွက်စာတင်ခါ စကလည်း interview သုံး ခုသွားခဲ့သေးတယ်။ အဲ့ဒီတုန်းက ၁ ခုက offer ပြန်လာတယ်။ အဲ့ဒီတုန်းကလည်း ရတဲ့ offer ကို reject လုပ်လိုက်တယ်။ ကျန်တဲ့ နှစ်ခုက offer မရဘူးဆိုတာ interview ပြီးသွားထဲက သိနေတယ်။ ၁ခုကတော့ ကိုယ်နဲ့မှလုံးဝ မကိုက်လို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာ သိလိုက်တာပါ။ နောက်တစ်ခုကတော့ inteview room ထဲမှာ မေးတဲ့သူ နဲ့ရန်ဖြစ်လု ဖြစ်ခင် ဖြစ်လာလို့ ပါပဲ။ တကယ် အချိုးမပြေပါဘူး။ သူတို့ ကို သူတို့ဘာများမှတ်နေလဲ မသိဘူး။ ပြောပေါက်ဆိုပေါက်က လုံးဝ အချိုးမပြေဘူး။ interview တာနဲ့မတူဘူး။ အဆင့် မရှိဘူး ပြောပုံဆိုပုံတွေက။ ခု ပြန်တွေး ခုဒေါသ ဖြစ်တယ်။ ထားပါ။ အဲ့ဒီ အကြောင်းတွေ မရေးချင်တော့ပါဘူး။ ပြောသာပြောရတာ အဲ့ဒီ ရန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ interview က offer ပေးချင်ရင် ပေးနိုင်တဲ့ အခြေအနေ တော့ရှိတယ်။ ဟီး.. ရန်ုဖြစ်တာကို ကြိုက်တယ်ဆိုပြီး ခန့် ချင်ခန့် လိုက်နိုင်တာပဲလေ။ သိတဲ့ အတိုင်းပဲ တစ်ချို့အလုပ်တွေမှာက fighter လိုတယ် မဟုတ်လား။
နောက် ဒီမှာ ကြုံရတာလေး တစ်ခု ရေးဦးမယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ လက offer တစ်ခုကတော့ interview ကို သွားစရာမလိုပဲ ပေးတာ ရလိုက်သေးတယ်။ pay ကလည်း တော်တော် ကောင်းတယ်။ လက်ရှိအလုပ်ထက် ၁၂၀၀ လောက်ပိုများတယ်။ ပြီးတော့ လက်ရှိ အလုပ်မှာ ၂ လ နေရဦးမယ်ဆိုတော့ လျှော်ဖို့လိုရင် လျှော်ဖို့ပိုက်ဆံပေးဦးမယ်ပြောတယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာက notice မပြည့်ပဲ ထွက်မယ်ဆို လျှော်ကြေးပေးပြီ မှ ထွက်လို့ ရတာကို။ အင်း... အဲ့ဒီမှပဲ ဒီနိုင်ငံမှာ interview ကို လူကိုတိုင်သွားစရာမလိုပဲ၊ ဖုန်းနဲ့စကားနည်းနည်း ပြောပြီးတာနဲ့အလုပ်တန်းပေးတာမျိုးတွေ ရှိမှန်း သိလိုက်ရတယ်။ အဲ့ဒီ ဟာကို လက်မခံဖြစ်လိုက်ပါဘူး။ ချက်ချင်းကြီးဝင်စေ ချင်နေတာ ဆိုတော့ ဘယ်လို ဖြစ်နေမယ်မှန်းလည်း မသိ၊လခက ကောင်းရုံတင်မကဘူး လျှော်ဖို့နှစ်လခစာတောင် ပေးဦးမယ်ဆိုတော့ လန့်သွားတယ်။ ကိုယ်က အဲ့လောက်တောင် လခတွေ စွတ်ပေးချင်၊ အလုပ်သိပ်ပေးချင် ဖြစ်နေရလောက်တဲ့ အဆင့် မရောက်သေးတာကို ဒီလိုကြီးလာပေးတော့ လက်မခံချင်ဘူး။ အလုပ်ရှင်တွေက ပိုက်ဆံပေးတယ်ရတယ်ဆိုရင် ပေးရ သလောက်နဲ့တော့ တန်အောင်ခိုင်းမှာပဲ။ ပုံမှန် ကိုယ်လုပ်ရတဲ့ IT အလုပ်တွေကတောင် တော်တော်ပင်ပန်းနေတာ သူက သာမန်ထက်ပို ပေးနေတယ်ဆိုတော့ ဘယ်လောက်များ လုပ်ရမလဲ တွေမိပြီး လက်မခံဖြစ်လိုက်ဘူး။ ပြီးတော့ ဒီ အလုပ်မှာကလည်း ကိုယ့်ကို လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကို သိနေတော့ ချက်ချင်းကြီးလည်း အလုပ်မပြောင်းချင်ဘူးလေ။ notice ၂ လ ပေးရတယ်ဆိုရင်လည်း အပြည့်ပေးပြီး ထွက်တာပဲ ကောင်းပါတယ်။ မျက်နှာ ပျက်စရာ မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။ ဒီနိုင်ငံရဲ့ IT လောက က ဘယ်လောက် ကျယ်လို့ လဲ။ ဘာပဲ ပြောပြော ဒီနိုင်ငံမှာ ဆက်နေနေ ဦးမယ်ဆိုရင် ဒီအလုပ်က လူတွေနဲ့တစ်ချိန်ချိန်တော့ တစ်နေရာရာမှာ ပြန်တွေ့ရဦးမှာပဲ။
ဒီနေ့ ကစပြီး ခဏလောက် အနားယူလိုက်ဦးမယ်။ အဲ့လို အနားယူခွင့်ရတာကို မနာလို ဖြစ်တဲ့ သူတွေကလည်း ကျိတ်ပြီး မနာလို ဖြစ်နေကြတယ် ဆိုတာ သိနေတယ်။ တစ်ချို့ ဆို အောင့်မထားနိုင်လို့ သူတို့မနာလို ဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်းဖွင့် ပြောပါတယ်။ ဟဲ.. ဟဲ.. ဘာမှ စိတ်မပူပါနဲ့သိပ်ကြာကြာ မနားပါဘူး။ ၁ပတ် အလွန်ဆုံး ၂ ပတ် လောက်ပဲ နားမှာပါ။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ ဒီ ၂ ပတ်က အလုပ်သာ သွားဖို့မလိုတာ လခက ရနေဦးမှာလေ။ ပြီးရင်တော့ offer တစ်ခုခုကို accept လုပ်ပြီး အလုပ်ခွင် ပြန်ဝင်မှာပါ။ ခုချိန်ထိ အလုပ် အသစ်ကို လက်မခံသေးတာ၊ နားချင်ရုံ တစ်ခုထည်းကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။ အလုပ်တစ်ခုခုကို မြန်မြန် accept လုပ်လိုက်၊ ပြီးရင် အလုပ်အသစ်ရတဲ့ အထိန်းအမှတ် အနေနဲ့မုန့် လိုက် ကျွေးရမယ်ဆို သူများကို ချက်ချင်းကြီး မုန့် လိုက် မကျွေးချင် သေးတာကလည်း အလုပ်အသစ် accept မလုပ်ဖြစ်ရခြင်းရဲ့ အကြောင်း တစ်ချက်လို့ထင်ချင်က ထင်နိုင်ပါတယ်။
Labels: Diary, Interviews, Singapore
Posted by Nay Nay Naing at 10/16/2006 10:41:00 PM 1 comments
How to stop automatic updates from installing IE 7.0
ဒီမနက် သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က ပြောတာနဲ့Microsoft က နောက် သိပ်မကြာခင် IE 7.0 ကို auto update လုပ်တော့မယ်တဲ့ ဆိုပြီး သိလိုက်ရတယ်။
IE7Auto Update News.
IE 7.0 စထွက်တည်းက သူများတွေ ပြောင်းသုံး၊ စမ်းသုံးကြည့်နေကြတာ သိပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ ခုချိန်ထိ IE6ကို သုံးနေတုန်းပါပဲ။ IE7ကပိုကောင်းရင် ကောင်းမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ခုချိန်ထိတော့ ပြောင်းသုံးကြည့် ဖို့ရည်ရွယ်ချက် မရှိသေးပါဘူး။ မလိုအပ်ပဲ IE6ကနေ IE 7ကို ပြောင်းလိုက်လို့ တက်လာမယ့် ပြဿနာတွေကို အရှင်းချင်းဘူး။ ကျွန်မလိုပဲ IE 7.0 ကို ပြောင်းမသုံးပဲ IE6ကို ပဲ သုံးချင်တဲ့ သူတွေ အတွက်တော့ ဒီသီတင်းက တော်တော် မကောင်းတာပဲ။ Microsoft က တခါတလေ အဲ့လို့မဟုတ်ကဟုတ်က အလုပ်တွေ သိပ်လုပ်ပါတယ်။ သူ ဟာသိပ်ကောင်းနေရင် ကိုယ့်ဟာကို ပြောင်းသုံးမှာပေါ့။ ဒါမို့ လည်း တခါတလေ Microsoft product တွေသုံးရတာ စိတ်ကုန်မိတာပါ။ ထားပါလေ။ ခု.. IE6ကနေ7ကို auto update မလုပ်ချင်သူများ ဘယ်လို ကာကွယ်လို့ရတယ် ဆိုတာလေးကို ပြောပြ ချင်တာပါ။
ပတမ ဆုံးအနေနဲ့IE70Blocker.cmd ကို ဒီမှာ ဒေါင်းလုတ် လုပ်ပါ။ ပြီးရင် အောက်က ပြောထားတဲ့ အဆင့်တွေ အတိုင်းလုပ်လိုက်ပါ။ မြန်မာလို မရှင်းတတ်လို့English လိုရှင်းထားတာကိုပဲ ပြန်လည် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
1. Copy the IE70Blocker.cmd to drive C of your PC or Notebook
2. Go to command prompt and navigate to drive C of your Pc or Notebook
3. Run the IE70Blocker.cmd with the following parameter
C:\_>IE70Blocker.cmd machine name /b
ie70blocker.cmd [machine name] [/B] [/U] [/H]
B = Block Internet Explorer 7.0 deployment
U = Allow Internet Explorer 7.0 deployment
4. You should seeanotification on the command prompt screen
Note : This step only block Window Automatic Updates from Installing IE 7.0 on your PC automatically. It does not prevent you from manually installing it. Thus if you choose to doamanual window updates. It will not be shown under priority or express updates but under optional updates. If you choose to install it under optional or by custom method, it will still be deploy into you PC
Posted by Nay Nay Naing at 10/11/2006 03:27:00 PM6comments
ဒါနဲ့စဉ်းစားမိလိုက်တယ်။ အဲ့ဒီတစ်ယောက် ဒီ script ကို သူ့ ဟာသူ ရေးတာတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ( အကြောင်း သိတွေပဲလေ။ သူရေးတာဆို ဒီလို ဘယ်နေမလဲ။ ဟီး... ) သူ တနေရာရာက ရတာပဲနေမှာ၊ ဒါဆို internet မှာ ရှာကြည့် ရင် တွေ့ ချင်တွေ့ မှာ ဆိုပြီး လုပ်လက်စ အလုပ်ကို ရပ်ပြီး google မှာ ရှာကြည့်တယ်။ မတွေ့ ဘူးဗျာ။ ဘယ်တွေ မလဲ။ ကျွန်မက သူပေးတဲ့ script ကို copy & paste လုပ်ပြီး search နဲ့ရှာကြည့်လိုက်တာကို။ ဒီနေရာမှာ တစ်ခုပြောစရာရှိတယ်။ Google Search မှာ ရှာမရတာတွေကို တခါတလေ Yahoo Search နဲ့ရှာရင်တွေ့ တက်တယ်၊ ဒါနဲ့yahoo မှာ ဆက်ရှာကြည့်လိုက်တော့ link တော်တော်များများ တွေ့ တယ်။ အဲ့ဒီက လင့်တွေကို လိုက်ဖတ်ကြည့် လိုက်တော့ FireFox မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ script တခုကိုပါ တွေ့ လိုက် ရတယ်။
အဲ့ဒီ script နှစ်ခုလုံးက စမ်းကြည့်တာ Yahoo နဲ့Google အပြင် တစ်ခြား web pages တော်တော်များများမှာ အလုပ်လုပ်တာတွေ့ ရတယ်။ Blogger မှာလဲ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒီလို စမ်းကြည့်လို့ ရပါတယ်။
၁။ ပေးထားတဲ့ script ကို copy လုပ်ပါ ( IE သုံးနေရင် IE ကို copy လုပ်ပါ။ FireFox သုံးနေရင်တော့ FireFox ကို copy လုပ်ပါ) copy လုပ်ရာမှာ တစ်ကြောင်းတည်း ဖြစ်အောင် လုပ်ရပါမယ်။
၂။ ပြီးရင် copy လုပ်ထားတဲ့ script ကို browser ( ကျွန်မရဲ့ ဘဘောခ့် နဲ့စမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်မ ဘလောခ့် ရှိနေတဲ့ page) ရဲ့ address bar မှာ paste လုပ်ပြီး Enter (or) Click Go.
ဘာဖြစ်လည်း တွေ့ ရမှာပါ။
Posted by Nay Nay Naing at 10/10/2006 11:51:00 AM4comments
ဒီနေ့သူငယ်ချင်းတယောက် ပြတာနဲ့ဒီ မျက်ဖြေလင်္ကာ လေးကို ပလန်းနက်မှာ တင်ထားတာ ဖတ်လိုက်ရတယ်.. တော်တော်များများ သိပြီးသား နေမှာပါ.. နှစ်သက်မိတဲ့ စားသားတွေမို့ လို့ဖတ်ချင်တဲ့ အချိန် ပြန်ဖတ်လို့ ရအောင် ဒီမှာ လာမှတ်ထားလိုက်တာပါ.. အသက်က ကြီလာတော့ မေ့တာတွေ များလာပြီလေ.. နောက်ဆို မေ့သွားနိုင်တဲ့ မှတ်ချင်တာလေးတွေကို ဒီမှာ လာမှတ်ထားတော့မယ်...
သူတည်းတစ်ယောက် ကောင်းဘို့ရောက်မူ သူတစ်ယောက်မှာ ပျက်လင့်ကာသာ ဓမ္မတာတည်း။
ရွှေအိမ်နန်းနှင့် ကြငှာန်းလည်းခံ ပျော်စံရိပ်ငြိမ် စည်းစိမ်မကွာ မင်းချမ်းသာကား သမုဒ္ဒရာ ရေမျက်နှာထက် ခဏတက်သည့် ရေပွက်ပမာ တသတ်လျှာတည်း။
ကြင်နာသနား ငါ့အားမသတ် ယခုလွှတ်လည်း မလွတ်ကြမ္မာ လူတကာကို ခန္ဓာခိုင်ကျည် အတည်မမြဲ ဖောက်လွှဲတတ်သည် မချွတ်စသာ သတ္တ၀ါတည်း။
ရှိခိုးကော်ရော် ပူဇော်အကျွန် ပန်ခဲ့တုံ့၏ ခိုက်ကြုံဝိပါတ် သံသရာစက်၌ ကြိုက်လတ်တွန်မူ တုံ့မယူလို ကြည်ညိုစိတ်သန် သခင်မွန်ကို ချန်ဘိစင်စစ် အပြစ်မဲ့ရေး ခွင့်လျှင်ပေးသည် သွေးသည်အနစ္စာ ငါ့ခန္ဓာတည်း။
Source : Planet ( Thank to Bleeds and TDO )
Posted by Nay Nay Naing at 10/06/2006 03:58:00 AM0comments
ပျင်းနေသော နေ့ များ
အား.... ခုတလော.. အရာရာ လုပ်ရ ကိုင်ရတာ စိတ်မပါဘူး ဖြစ်နေတယ်။ လုပ်မယ် စိတ်ကူးထားတာ မှန်သမျှ တကယ်လုပ်တော့မယ်ဆို လုပ်ချင်စိတ်က မရှိတော့ဘူး။ အလုပ်ရောက်နေရင် အိမ်ပြန်ချင်နေတယ်။ ဟော.. အိမ်ရောက်ပြန်တော့လည်း ဘာလုပ်ရမှန်း မသိ။ အလုပ်မှာပဲ ရှိနေတာ ကောင်းသလိုလို ခံစားရပြန်ရော။ ဒါနဲ့ဒီရက်ပိုင်း အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့စာလေး နည်းနည်းလောက်ဖတ်.. ခဏနေတော့ စောစောစီးစီး အိပ်ရာဝင်ပြီး နောက်ကျမှ ထဖြစ်နေတယ်။ အဲ့လိုဆိုတော့ အိပ်ရေးဝတော့ ကောင်းတာပေါ့ ဆိုပြန်ရင်လည်း အိပ်ရေးက မဝသလို ခံစားနေရပြီး အလုပ်မှာလည်း လူက ရွင်ရွင်လန်းလန်း မရှိ နုံးနေသလိုပဲ။ မနေ့ ကတောင် စီနီယာ ကပြောတယ်။ နင့်ကိုကြည့်ရတာ ဘာကိုမှ စ်ိတ်ဝင်စားမှု့မရှိသလိုပဲတဲ့။ ဟုတ်လားလို့ တော့ ဝတ်ကျေ တန်းကျေလေးတော့ ပြန်ပြောလိုက်မိ ပါတယ်။
တကယ်တော့ အလုပ်မှာရော အိမ်မှာရော လုပ်မယ်ဆို လုပ်စရာတွေက အများကြီး။ အိမ်မှာက ဟို တစ်ပတ်ကမှ အိမ်ပြောင်းတာ တချို့ ပစ္စည်းတွေက နေရာ မချရသေးဘူး။ လိုအပ်လို့ဝယ်ရမယ့် ဟာတွေလည်း ရှိသေးတယ်။ သွားမဝယ်ဖြစ်သေးဘူး။ လုပ်ပေးရမယ့် လူမှု့ ရေး ကိစ္စ တချို့ လည်းရှိသေးတယ်. မလုပ်ဖြစ်သေးဘူး။ အလုပ်မှာ ကြတော့လည်း အလုပ်က ထွက်တော့မယ် ဆိုတော့ ရှင်းပေးရမှာတွေ တော်တော်များများ ရှိနေတယ်။ အိမ်မှာရော .. အလုပ်မှာရော.. လုပ်ဖို့ရှိနေတာတွေက ခက်ခက်ခဲခဲ ကိစ္စတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်လို့ သာ စိတ်ပါလက်ပါလေး လုပ်လိုက်ရင် ခဏလေးနဲ့ပြီးသွားမယ့်ဟာတွေပါ။ အလုပ်မှာတော့ အိမ်မှာထက်စာရင် လုပ်ရမှာတွေကို နည်းနည်းပိုပြီး လုပ်ဖြစ်သေးတယ်။ မလုပ်ရင် မကောင်းဘူးလေ။ အိမ်မှာကတော့ မလုပ်လည်း ပြောမယ့်သူမှ မရှိတာ။
အင်း.. စိတ်ညစ်နေတာလား ဆိုတော့လည်း မဟုတ်ပြန်ဘူး။ စားလို့ ကောင်း၊ အိပ်လို့ ကောင်း။ ဒီရက်ပိုင်း မနက်စာရော နေ့ လယ်ခင်းစာ ပါ မုန့်မှန်မှန် သွားစား ဖြစ်နေသေးတယ်။ လူက အပျင်းထူပြီး motivation မရှိဘူး ဖြစ်နေတာနဲ့ တူတယ်။ ဘာမှ မလုပ်ပဲနေတာ တော်တော် သက်တောင့်သက်သာ ရှိတာပဲနော်။ သြော် .... ဒါကြောင့် မို့ လည်း ပျင်းတယ်ဆိုတာ နာမည်သာဆိုးတာ လူတော့ သက်သာသားလို့သူများတွေ ပြောနေကြတာကို။
Posted by Nay Nay Naing at 10/03/2006 12:11:00 PM2comments
အဆီကို စား အသားကို မျို
ဒါလေးကို " ဦးသန်းထွတ်ရဲ့ ကျွန်တော်နှစ်သက်မိသော ကဗျာများ " စာအုပ်မှာတွေ့ လို့ကူးယူဖော်ပြတာပါ။
ကျွန်မတို့ငယ်ငယ်တုန်းက ကြားနေကြ ကဗျာလေးတွေပါ။ ကဗျာလို့ ခေါ်မလား။ သားချော့တေးလို့ပဲ ပြောရမလား။ ဘယ်လိုပဲ ခေါ်ခေါ် ဒီစာသားလေးတွေဟာ ကျွန်မတို့ ငယ်ငယ် ကလေးဘဝ ထဲက ရင်ရင်နှီးနှီး ကြားဘူးနေတဲ့ အရာလေးတွေပါ။ ကျွန်မ စဉ်စားမိသလောက်တော့ တော်တော်များများကို ရှိတာပဲ။ ကျွန်မ မှတ်မိသလောက်လေးတွေကို ဒီမှာ တင်ဦးမယ်။ တချို့လည်း မှတ်မိကြမှာပေါ့ တချို့ လည်း မေ့လောက်ပြီ ထင်တယ်။ ဘာပဲပြောပြော .. အမှတ်တရ.. ပေါ့။
Posted by Nay Nay Naing at 10/01/2006 10:55:00 PM0comments
How to stop automatic updates from installing IE 7...